Ukudla Eyakho I-Dogfood | Martech Zone
ULwesihlanu, February 6, 2009 NgeSonto, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Uzothola leli gama lisetshenziswe kancane kwi-Intanethi. Uma ngikhuluma nge ukubhuloga ezinkampani, Ngisebenzisa leli gama ngoba ukuhola kwenkampani yethu kuvela ngqo… kubhulogi ezinkampani.
Lokho kusho, lesi isithombe esikhuthazayo engisitholile ngeStumbleUpon kuso Ibhulogi kaScott Rope. Khuluma ngokudla eyakho i-dogfood!
Hlobo luni lokukhangisa ongaluthola ngokufaka umkhiqizo wakho? Ngingathanda ukubona ezinye izibonelo zalokhu!
Tags: insizakalo yokulethwa kwedathaUkuphathwa kwedathaUkwehluleka: Imfihlo Yokuphumelelaimbuyiselo yezimakethe zokuseshaukhubekeWordPress
Akukona Ukuthola lula Kubathengisi
Ukumaketha kwe-B2B kudinga imiboniso ethe xaxa, ekhumbulekayo kanjena.
Njengopopayi wokubhala, ngenzela enye incwadi yami: yayinendoda esejele futhi umnyango weseli uvalwe ngengidi yebhayisikili yaseKryptonite. Isihloko esikhulu besimane sithi 'Isela Lebhayisikili'.
UDoug, yize lokhu kwenza isithombe esihle, iqiniso, ngombono wami, lenza lokhu kumaketha okungalungile.
Empeleni, bekungama- $ 500 kuphela emali yangempela efakwe ngaphezulu kwemali mbumbulu, futhi abantu bebengasebenzisa izinyawo zabo kuphela ukuzama ukuyiphula. Unogada ubekhona ukuqinisekisa ukuthi akekho ophula imithetho nokuthi abantu abakwazi ukuthola imali uma beyephula. -GizModo
Ngicabanga ukuthi lokhu kukhushulwa okungenani kuyakhohlisa okuncane, ngoba ukubeka amakhulu ambalwa kuphela amadola nokuba nezokuphepha kukhombisa ukuthi izimangalo zomkhiqizo zidlula kakhulu amandla angempela. Ungenzi wena uzizwe udangele ngemuva kokuthola la maqiniso?
Futhi akusona isibonelo “sokudla i-dogfood yakho.” Lelo igama lomkhakha wesoftware lokwenza ukuhlolwa kuzinhlelo zokusebenza ozenzayo ngokuzisebenzisa ukwenza ibhizinisi lakho. It is okuthile okwenzayo eCompendium, kepha ukubeka inqwaba yemali ecishe ibe ngeyamanga nonogada amahora ambalwa ekubonisweni komphakathi akuwenzi ibhizinisi lakho kumkhiqizo wakho. Ukuze i-3M empeleni "idle i-dogfood yayo," kuzofanele basebenzise ingilazi yabo yezokuphepha ukuvikela kakhulu izimpahla zenkampani.
Abantu bafanelwe ukuphathwa ngokwethembeka nangenhlonipho, futhi ukusebenzisa ngokuziqhenya imikhiqizo oyenzayo kuyindlela enhle yokubakhombisa ukuthi uyakholelwa emsebenzini wakho. Ukuhlanganisa i-photo-op elawulwayo ukukhiqiza i-buzz yamanga kubonakala kungathembeki ngokuphelele futhi kunenhlonipho. Lokhu kungukuqina, hhayi ukuboniswa okuqhubekayo kokuthembela kumikhiqizo yakho. Ngicabanga ukuthi i-3M kufanele isabele endleleni abantu abasichaze ngayo lesi sithombe futhi baxolise.
Wow - ungumqapheli ongokoqobo! (umphelelisi, hhayi ukuthuka).
Re: Ukudla i-dogfood yakho - noma ngabe uhlelo luyisoftware noma luyisikhangiso, akunandaba. Lowo ngumbono wami futhi nginamathela kuwo.
Re: Isikhangiso - ngiyabonga ngobuciko obubandakanyekile esikhangisweni. Ukuthi yi-stunt noma cha akubalulekile; kwenza abantu bacabange ngomkhiqizo noma ngenkonzo.
Ucabanga ukuthi inhloso bekungokoqobo - ukuthi kukhona amadola ayizigidi ezimbalwa ngaphandle lapho i-3M ivikela ngengilazi yabo. Ukucabanga kwami ​​bekuhlukile - ukumane nje bafuna ukuxoxa indaba. Lapho nje ngibona isithombe, ngiyayiqonda indaba.
Ngokubona kwami, ngikholelwa ukuthi yisikhangiso esinamandla.
Ngakho-ke usho lokho ukuthola amaqiniso ngemuva ukubona isithombe akubanga nomthelela ekuboneni kwakho isikhangiso? Ngibikezela ukuthi cishe wonke umuntu obona lesi sithombe abese efunda ukuthi bekuyisitobha santambama, bekukhona unogada, ubungakhahlela ingilazi kuphela, futhi cishe yonke imali ibingumbombayi — uzozizwa udangele. Lesi yisici se- ezimbi ukukhangisa: lapho uthola ukuthi obekucabanga ukuthi kuyiqiniso empeleni akulona.
Kungumqondo omuhle nge-3M ukukhombisa amandla engilazi yabo emphakathini. Kepha kungani ungamiseli ikhiyubhu evikelekile enenqwaba yezitini ehlala engilazini yeshidi? Noma ukudala phansi ingilazi? Lokhu kukhuluma indaba enhle eyiqiniso ngokuphelele!
Ngeqiniso angikwenzi. Zonke izikhangiso esizibonayo kulezi zinsuku ziba nehaba ukuze 'sixoxe indaba', noma ngabe kuyisikhangiso semoto noma isikhangiso seGoogle Adwords. Nakulokhu futhi, angicabangi ukuthi inhloso ye-3M bekungukuqamba amanga, bekuwukuqhamuka nesikhangiso sokudala.
Kulokhu, ngicabanga ukuthi benze umsebenzi omuhle. Inqwaba yamatshe engilazini ibingeke ibe nomthelela (ngokombono wami). Lokho kungakhuluma 'namandla' kepha hhayi 'ukuphepha' kwento.
Manje, ukube lesi sithombe besiphelezelwa yividiyo noma indaba esho ukuthi bekunezigidigidi zamaRandi kuphaneli futhi besishiywe izinsuku ezingama-30 endaweni yomphakathi, ngaphandle kwezokuphepha… bengizovumelana nawe. Kodwa-ke, i-3M ayizange ihambisane nendawo nganoma iyiphi yalezi zinto.
Akekho, emiqondweni yabo efanele owayezokwakha ibhange elisha ngesisefo esenziwe ngengilazi yezokuphepha eyi-3M ngemuva kokubona lokhu, akunjalo? Angicabangi.
Lokho ngumbono omuhle kakhulu! Futhi ngihlale ngiyithanda inkulumo ethi 'yidla i-dogfood yakho'!
Uxolo uDoug, kepha ngivumelana noRobby kulokhu. Lapho ngiqala ukubona isithombe angikholwanga ukuthi inkampani ingaqiniseka ngalowo mkhiqizo wabo ukuthi bazokhipha imali eningi ngaphakathi kwawo, bamane nje babe nesibindi sokuzama ukusintshontsha.
Bengizoshiya amazwana kusayithi lakho ngibuza ukuthi ngabe banamakhamera wevidiyo afihliwe abonisa abantu abazama (futhi mhlawumbe behluleka) ukwephula ingilazi.
Kepha lapho uRobby echithe ubhontshisi ngokuba nonogada, esebenzisa izinyawo zakho kuphela futhi enemali engumbombayi, ngazizwa ngikhohlisiwe.
Angicabangi ukuthi ngicishe ngibe ne-3M (ngisazothenga amanothi eposi) kepha isikhangiso ngokusobala silahlekelwe yilo lonke inani laso nami futhi angizukuzama ukuthenga ingilazi yabo yokuphepha.
Uma ngibheka lo mkhankaso owethulwe ngoFebhuwari 2005, ngingasho ukuthi lokhu kunikeza incazelo entsha kumsila omude. Ngiyethemba iqembu le-PR / Marcom lisenezixwayiso zalo ze-google- le ntambo yokuthunyelwe izobamangaza.
Okuthunyelwe kuka-2005: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php
Ngokombono wokuxhumana, lokhu kungumbono obonakalayo ngokushesha oxhumana nomkhiqizo, oqinisa amanani abo futhi unikeze umlayezo onamandla. leyo yinto enzima ukuyenza esitobhini sebhasi.
Aug 7, 2009 ngo-4: 51 PM
Ngokusobala uRobby Slaughter akaliqondi izwe lezokumaketha… ukhuluma ngalokhu njengamanje angithi, Robby? Hhayi-ke, kubonakala sengathi bekuyithuluzi elinekhono lokumaketha. Ukukhangisa kumayelana nokwenza isithombe esingalibaleki engqondweni yomthengi, futhi lesi senzo ngokusobala ngeke sibonakale. Kungakhathalekile ukuthi inane yakho idinga ukuxoxa ngokunemba / ukunganembi kwayo, futhi noma ngabe umkhiqizo empeleni usebenza ngendlela obungathanda ngayo ukusuka esithombeni…. manje usuwazi kakhulu umkhiqizo wawo. Manje usunesithombe esingacimekiyo sengilazi yokuphepha engu-3M ekhanda lakho. Ngakho? Ukumaketha ngobuchule, isikhathi.